Ampitomboina ny fibrinogène amin'ny fitondrana vohoka
Ny pregnancy of a woman is associated with perestroika, affecting all the systems of her body. Noho izany dia zava-dehibe tokoa fa ny rafitra homeostasis koa dia ao anatin'ny fahasamihafana. Ny tsy fisian'ny fifandanjana dia mety miteraka fahasarotana eo amin'ny fitondrana vohoka. Ny endriky ny fibrinogen ao amin'ny ra no iray amin'ireo fampahalalana an'io fihenam-bidy io.
Ny fibrinogen dia proteinina iray izay mialoha ny fananganana ny vatan'ny fibrinina, izay fototry ny clot rehefa mipoitra ny ra.
Io proteinina io dia manan-danja lehibe amin'ny fitondrantena ara-dalàna ny fahasalamana, ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza. Ny tahan'ny fibrinogène ao amin'ny rà vehivavy bevohoka dia 6 g / liter, raha ny salan'isa izany tarehimarika io dia 2-4 g / liter.
Ny habetsahan'ny fibrinogène hita ao amin'ny rà dia miovaova arakaraka ny taom-piaviana sy ny toetran'ny vatan'ny vehivavy. Ny fampitomboana ny lanjan'ny fibrinogène amin'ny maha-bevohoka dia rafitra natsangan'ny natiora, izay ilaina mba hiarovana ny reny sy ny zaza amin'ny fandotoana mety amin'ny fotoam-pivoriana. Ny habetsan'ny fibrinogen dia manomboka mitombo avo telo heny amin'ny trimès fahatelo, izay vokatry ny famolavolana rafitra mpamokatra hafa, ny anjara andraikitra lehibe indrindra amin'ny tranon-kibo sy ny placenta. Amin'ny fiafaran'ny fitondrana vohoka, ny fifantohana ny fibrinogena dia mahatratra ny lanjany lehibe indrindra amin'ny 6 g / liter.
Ny fibrinogène avo amin'ny fitondrana vohoka, tsy mihoatra ny soatoavina fetra, dia tsy tokony hanelingelina vehivavy iray, midika izany fa mitranga ny fitondrana vohoka.
Mba hamaritana ny haben'ny fibrinogen ao amin'ny rà, ny reny hoavy dia hanome ny kimilograma isam- bolana . Ny famakafakana dia omena amin'ny vavony tsy misy vidiny mba hahazoana valiny azo antoka. Mifototra amin'ny fanadihadiana, ny dokotera dia mamarana ny votoatin'ny fibrinogène amin'ny vatan'ny vehivavy bevohoka.
Ahoana raha efa nitombo ny isan'ny fibrinogen nandritra ny fitondrana vohoka?
Raha ny habin'ny fibrinogen dia mihoatra ny sanda azo avaozina (mihoatra ny 6 g amin'ny litera), ny vehivavy dia nomena fitsapana lalindalina kokoa hijerena ny rafi-kodiny amin'ny rà, mba hanamafisana na hanilihana ny piozila sasany. Ny fitomboan'ny fibrinogène amin'ny fitondrana vohoka dia manondro fa ny vehivavy bevohoka dia mijaly amin'ny aretim-panafody na aretina entina, na ny vatan'ny olona maty.
Ny psikology iray hafa dia ny trombôlôla, izay manamarika ny fiakaran'ny tahan'ny ra. Io toe-javatra io, raha tsy voamarina amin'ny fotoana na tsy voatsabo, dia mety hiteraka vokatra ratsy ho an'ny vehivavy bevohoka sy ny foibeny. Noho izany, raha misy vehivavy voan'ny trombôlôly, dia tokony hitandrina mandrakariva ny mpitsabo aretin-tsaina sy ny hematologist izy.
Noho izany, raha mitombo amin'ny vehivavy ny fibrinogène amin'ny vehivavy bevohoka, dia ilaina ny fitsaboana amin'ny fotoana sy amin'ny fomba mahomby.
Fomba ahoana no hampihenana ny fibrinogène amin'ny fitondrana vohoka?
Raha be fibrinogen ny vehivavy bevohoka, dia tokony hanaraka ny toro-marihan'ny dokotera ny vehivavy ary handray ny fanafody ilaina. Ankoatra izany, afaka manampy azy amin'ny fijeriny indray ny sakafony. Hanampy amin'ny fampihenana ny fibrinogen:
sôkôla sy kakaô;
voatabia sy kôkômbra;
seafood, trondro mena, ranomasina kale.
Ny ravin-kazo avy amin'ny fotony, ny katsatsaka, ny aloe vera ary ny calanchoe dia hanampy amin'ny fampihenana ny haavon'ny fibrinogen. Nefa tokony ho tsaroana fa tsy tokony handray hetsika tsy miankina mikendry ny fihenanana fibrinogen ianao raha tsy mijery ny dokotera.
Fitantanana ny fitondrana vohoka
Stomatitis nandritra ny fitondrana vohoka
Herinandro vody 19 herinandro - inona no mitranga?
1 herinandro ny bevohoka - fahatsapana
Dream interpretation - ny ranomasina ary ahoana no fomba handikana nofinofy momba ny ranomasina?
Ny sarin'ny Krismasy TOP-20 mipetaka amin'ny ankizy izay tokony heverina fa tsy mitovy
ALT sy AST - ny fitsipika momba ny vehivavy
Ny rain'i Rihanna dia nilaza fa tena sarobidy ny volon'i Kanye West
Zavamaniry zaridaina miteraka - varimbazaha
Toeram-pisakafoanana misy kabine ao amin'ny efitra fandroana
Ny fiatoana valifaty Mitral - inona izany, inona no mampidi-doza?
Photoshoot amin'ny lobolin'ny lehilahy
Bag shopper - inona no hevitr'izany, ahoana no fijery azy ary inona no tokony hampiarahana azy?
Jenna Devan nizara ny tsipiriany momba ny fiainam-pahafinaretana miaraka amin'i Chenning!
Fanafody ho an'ny tenda maloto
Mialà amin'ny fiainana vaovao: Brad Pitt dia mamela fanaka sy ... fahatsiarovana an'i Branjelin